XOG: Wada hadal hoose oo u socda Dowlada Soomaaliya iyo Al Shabaab (Akhriso Xog Arintaan laga helay) - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
XOG: Wada hadal hoose oo u socda Dowlada Soomaaliya iyo Al Shabaab (Akhriso Xog Arintaan laga helay)
Illo ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in wada hadal hoose uu u socdo Xarakada Al-Shabaab iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in dhowr mar madaxweyne Farmaajo iyo Hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cumar Diiriye khadka taleefanka ku wada hadleen,inkastoo si dhab ah ah loo ogaan karin waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo haddii uu jiro isfaham dhexmaray.
Sidoo kale, Xogta aan arrintaan ka helnay ayaa tilmaameysa in sababta madaxweyne Farmaajo uu mudada labada sano ah ee Dowladdiisa ay jirto dagaalka ugu qaadi waayay Al-Shabaab ay tahay wada-hadaladaasi labada dhinac u socday iyo waliba iyo inta natiijo wax ku ool ah laga gaarayo dagaal la qaadin.
Wada hadalada ayaa waxaa garwadeyn ka ah qaar ka mid ah culimada Soomaaliya Soomaaliyeed oo labada garab ka kala tirsan,waxaana si joogta ah u wada xiriira guddi culimo ah oo ka kala socda Al-Shabaab iyo Dowladda Federaalka oo loo xil saaray iney isku soo dhoweeyaan Al-Shabaab iyo Dowladda Federaalka.
Lama oga halka ay wax marayaan,balse warar hoose oo ay Shabakadda shaaciye.com heleyso ayaa sheegaya iney arrinta u muuqata mid aan natiijo laga gaarin karin maadama Al-Shabaab qorshahan ka caga-jiideyso.
Dowladda Madaxweyne Farmaajo oo mudo labo sano iyo dheeraad jirta ayaa wax dagaal ah ku qaadin Al-Shabaab,taasi caksigeedana Al-Shabaab waxay dib u qabsadeen deegaano muhiim ahaa oo horay looga saaray.
Waxaa la aaminsan yahay in Dowladdii Sheikh Shariif Sheikh Axmed si adag ula dagaalantay Al-Shabaab kana riixday magaalada Muqdisho oo ay fariisimo muhiim ah ay ku lahaayeen.
Al-Shabaab ayaa hadda Qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo joogta ah waxay ka geystaan magaalada Muqdisho,iyadoo waliba ay wadooyinka xiran yihiin.